I-County ibhengeza utshintsho kusasazo lokugonya- princetoncovid.org
Icandelo lezeMpilo laseMercer County libhengeze ebutsheni bale veki ukuba lenze utshintsho kusasazo lokugonya olusekwe kumyalelo weSebe lezeMpilo laseNJ. Ndiyacela Cofa apha Uhlaziyo lwe-Vaccine kaFebruwari 10.
** Nceda uqaphele: Ukuba unedosi yesibini ehlelwe liSebe lezeMpilo ePrinceton, uyakuyifumana idosi ngomhla omiselweyo.
Ukubhalisela Ugonyo - Joyina uluhlu lokulinda ngokusebenzisa i Inkqubo yokuCwangciswa kweNtsholongwane yaseNew Jersey. Ukuzalisa ifom yobhaliso lwangaphambili kuthatha malunga nemizuzu eli-15. Uya kubuzwa imibuzo ethile ukumisela ukuba ukulungele na ukufumana ugonyo. Ukuba unengxaki yobuchwephesha ngobhaliso, tsalela umnxeba i-COVID yokuCwangcisa uNcedo kule nombolo (855) 568-0545 okanye ugqibezele oku Ifom yoNcedo.
Uluhlu lokulinda olukhoyo - Ukuba ukuluhlu lokulinda ePrinceton, uya kuqhagamshelana neCandelo lezeMpilo leMercer County kunye / okanye iSebe lezeMpilo lasePrinceton xa ukhethelwe i-aphoyintimenti. Ukuba ukuluhlu lokulinda kwaye ufumana ugonyo lwakho kwenye indawo, nceda email iSebe lezeMpilo likamasipala ukuba lisuswe kuluhlu lokulinda. Nceda ungaqhagamshelani nesebe malunga nokuqeshwa okanye ubume bokulinda.